-NEI ZVISARUDZO US-
Zvigadzirwa zvinodzivirira kubva pakubuda
Chaizvoizvo ipa rakachengeteka uye rakavimbika kurasa rinodzivirira ...
Izvo zvigadzirwa hazvisi kungotengeswa kumaguta makuru muChina, asiwo ...
Kuyera thermometer ndiyo yakajairwa izwi rekuti tembiricha yekuyera tembiricha. Kuyera thermometer inogona kutonga nemazvo uye kuyera kupisa. Hwaro hwegadziriro yeiyo yekuMesa thermometer ndeye kushandisa phenomena senge solids, zvinwiwa uye magasi anowedzera uye contract nekuda kwekushisa. Kuyera thermometer ine karafini thermometer, doro thermometer, mercury thermometer, gasi thermometer, upinzani thermometer, thermocouple thermometer 1, radiation thermometer uye Photometric thermometer, bimetal thermometer uye mamwe mahedmometer esarudzo yedu, asi isu tinofanirwa kutarisisa tembiricha yekushandisa chaiyo uye . Izvo zvine hukama nehunhu hweM kuyera thermometer inogonesa kushandiswa kwayo zviri nani.
Mhando dzekupfeka dzinodzivirirwa dzinosanganisira zvipfeko zvinodzivirira moto, zvipfeko zvekudzivirira zvemaindasitiri, zvipfeko zvekudzivirira zvekurapa, zvipfeko zvekudzivirira zvechiuto uye zvipfeko zvinodzivirira zvevanhu vazhinji.
Chipfeko chinodzivirira chine hunyoro hwakanaka kupomhodza uye zvipingaidzo, uye zvinokwanisa kurwisa doro, ropa, mafuta emuviri, mhepo guruva Zvipuka zveBacterial, zvakachengeteka uye zviri nyore kushandisa, zvinogona kudzivirira akapfeka kubva mukutyisidzirwa kweutachiona, kupfeka kwakasununguka, kunzwa kwakanaka, yakasimba tensile simba, inofema uye isina mvura, hapana muchwere kutapukirwa, nezvimwe.
Huma tembiricha pfuti
Mask Inodzivirira Gasket
Quanzhou waimaoniu Import uye Export Corporation yakagadzwa muna 2017.06.02, iri yakazara kambani inobatanidza dhizaini, kugadzira uye kutengesa. Chaizvoizvo ipa akachengeteka uye akavimbika marara ekudzivirira emasks, masiki eUK95, masks ekurapa, masks evana, masks evakuru, masks ehurumende, magirovhosi, magurovhosi egirazi, chipfeko chekudzivirira, thermometer, disinateant, sipo yemawoko, machini emachira, maski earbands, machira eMeltblown , machira ekotoni, mabhora ekotoni uye zvimwe zvinodzivirira. Zvigadzirwa zvacho hazvisi kungotengeswa kumaguta makuru muChina, asiwo zvinotumirwa kuEurope nekuEast Europe, Southeast Asia, Middle East .......